China Solar Branch Connector MC4 T Parallel Solar Iphaneli mveliso kunye nabathengisi | UBUNGOZI
Intambo yePV Solar
I-1000V yeCandelo elinye leSolar Cable
I-1000V yeCandelo leSola eliSibini
I-1500V yeCandelo elinye leSolar Cable
Ikheyibhile yeSolar ye-1500V kabini
Intambo yoMhlaba oMiselweyo
Intambo yeBhetri ye-BVR AC
Iklip Cable yeSola
Ikheyibhile yeSolar Cable
Isinxibelelanisi seSolar PV
Isinxibelelanisi seMC4 1000V
Isinxibelelanisi seMC4 1500V 50A
Isinxibelelanisi seMC4 10mm2
Isinxibelelanisi seFuse seMC4
Isinxibelelanisi sePhaneli seMC4 M12
Isinxibelelanisi seMC4 Diode
MC4 ukutywina Cap
Isinxibelelanisi seSebe leMC4
2 ukuya 1 T Isinxibelelanisi seSebe
3 ukuya 1 T Isinxibelelanisi seSebe
I-4 ukuya kwi-1 T yesinxibelelanisi seSebe
I-5 ukuya kwi-1 T yesinxibelelanisi seSebe
I-6 ukuya kwi-1 T yesinxibelelanisi seSebe
PV Cable Ukuzibophelela
Intambo ye-MC4 yoLwandiso
2 ukuya 1 Y Isinxibelelanisi seSebe
3 ukuya 1 Y Isinxibelelanisi seSebe
Isinxibelelanisi seSebe esi-4 ukuya ku-1
Umgangatho weKheyibhile yoMhlaba
SAE Ibhetri Cable
PV Fuse wesekethe Breaker
Umgcini weFuse Fuse
ISekethe Breaker MCB
Ukunyuka kwe-DC Arrester SPD
DC Isolator Tshintsha
Umqhubi weSekethe ye-AC
Ukunyuka kwe-AC Arrester SPD
I-AC RCCB RCB ELCB RCD
Ukusasazwa kweBhokisi yokuNgena
Umlawuli weSolar Charge
Umlawuli weSola wePWM
Umlawuli we-Solar ye-MPPT
Inverter encinci yelanga
Inverter encinci ye-400W
Inverter encinci ye-600W
I-1200W Inverter encinci
Anderson Power Isinxibelelanisi
1P Anderson Isinxibelelanisi
2P Anderson Isinxibelelanisi
3P Anderson Isinxibelelanisi
Isixhobo seKhiti yeeNgxowa
I-PV Tab yocingo lweBhasi yeBhasi
I-KN95 ubuso bokuphefumla
Intambo ye-1000V enye yeCore
Ikheyibhile ye-1000V ephindwe kabini
Intambo enye eyi-1500V
Ikheyibhile ye-1500V ephindwe kabini
1000V TUV PV1-F Solar Cable 4mm yoMvelisi
Iphaneli yeSolar Connector MC4 ene-DC 1000V TUV evunyiweyo
Umlawuli wePWm-30A 40A 50A 60A 1 ...
I-DC Cable ye-1500V H1Z2Z2-K Iingcingo zePaneli yeSola 6mm2
Uqhakamshelwano oluninzi lweMC4 Solar Cable Connector 1500V 50A
50A 120A 175A 350A Qhagamshela ngokukhawuleza i-2 Pole Anderson Con ...
Isolar Inverter yeSolar yeNkqubo MPPT 60HZ 600W ...
30A 40A 50A 60A 12V 48V Okrelekrele MPPT Solar Charg ...
10A 20A 30A 12V 24V Okrelekrele PWM Solar Charge Con ...
I-1000V yeSola yangaphandle yoKhuselo lwaMandla kwisiXhobo seAr ...
Solar PV weSekethe Breaker DC1000V DC550V DC800V DC MC ...
I-1000V DC yeSolar PV Fuse Holder 10x38mm yeSolar PV F ...
Oluzenzekelayo Car Car Extender Connector 2 Pin SAE Ibhetri C ...
2to1 MC4 Y Connector Idibanisa iiphaneli Solar kwi para ...
1000V 1500V OEM ngentando MC4 Solar Ulwandiso Cable ...
MC4 T Connector iPhaneli Solar Panel 2to1 kuthotho
10x38mm Solar fuse emgceni umnini 1000V MC4 fuse Conn ...
Solar Isixhumi seSebe leMC4 T iParal Solar Panels
Isihlanganisi sesithathu seMC4 T sesebe (1 Seta = 3Amadoda 1Amabhinqa + 3Amabhinqa ama-1Amadoda) sisibini sezidibanisi ze-MC4 zeepaneli zelanga. ukusuka kwiiModyuli ze-PV. 3in 1out isinxibelelanisi sesebe sinokulingana zonke i-MC4 Type Photonic Universe solar panels. Yi-100% engenamanzi (IP67), ukuze isetyenziswe ngaphandle kuyo nayiphi na imeko yemozulu.
Ukusekwa Igalelo eli-3, iziphumo ezi-1
Ixabiso elilinganisiweyo: I-1000V
Ikaliwe ngoku: 30A
Izinto: Ubhedu olunciniweyo, i-PPO
Udidi lwamanzi: IP67
Ubushushu obugciniwe: -40 ℃ ~ 100 ℃
Udibaniso lweSolar ukusuka kwipaneli yeSola ukuya kwi-PV Inverter
Inkcazo ye-3 kwi-1 MC4 T yesinxibelelanisi seSebe
Izihlanganisi zeMC4 zeSebe zisetyenziselwa iipaneli zelanga zentsimbi ezifanayo (iimodyuli zePV). Kuthengiswa njengababini, ezi "Y-Izihlanganisi" ziya kugcina amandla ombane wesimo sepaneli yelanga ukuze zilingane nobungakanani bebhetri. Ezi zihlanganisi zelanga ze1to3 zihambelana kuphela nezihlanganisi zeMC4 kwaye ziza nendoda enye (MMMF) kunye nesinxibelelanisi esinye sabasetyhini (FFFM). Sebenzisa ezi zihlanganisi zeMC4 zesebe ukwenza uqhagamshelo oluqinileyo, olungena manzi.
Idatha yobuGcisa yeMC4 yeSebe eliDibanisa 1000V
Kulinganiswe ngoku 30A
Ulinganise iVoltage I-1000V DC
Uvavanyo lweVoltage 6KV (50Hz, 1Min)
Izinto zonxibelelwano Yobhedu, Tin ngumfanekiswana
Izinto zokuvala izinto I-PPO
Ukumelana noQhakamshelwano <1mΩ
Ukukhuselwa okungangenwa ngamanzi IP67
Ubushushu obugciniwe -40 ℃ ~ 100 ℃
Iklasi yeLangatye Ul94-V0
Cable efanelekileyo Intambo ye-2.5 / 4 / 6mm2 (14/12 / 10AWG)
Isatifikethi TUV, CE, ROHS, ISO
Uncedo lweMC4 1to3 PV yesinxibelelanisi seSebe
Ukuzoba kweMC4 3to1 T Splitter
· Iminyaka eli-12 yamava kushishino lwelanga kunye norhwebo
Imizuzu engama-30 yokuphendula emva kokufumana i-imeyile yakho
· Iminyaka engama-25 iwaranti yeSolar MC4 Connector, ii-PV Cables
· Akukho kulalanisa kumgangatho
Egqithileyo MC4 T Connector iPhaneli Solar Panel 2to1 kuthotho
Okulandelayo: Iphaneli yelanga Cable Splitter 1 ukuya kwi-4 T yezihlanganisi zeSebe
UKUSETYENZISWA KWENKONZO YAMANDLA ENKQUBO. yasekwa ngo-2010 kwaye ibekwe kwi "World Factory" edumileyo, Dongguan City. Emva kweminyaka engaphezu kwe-10 yophuhliso oluqhubekekayo kunye nezinto ezintsha, i-RISIN ENERGY iye yaba ngumthengisi ophambili wase-China, owaziwayo kwihlabathi kunye nonokuthenjwa Solid PV Isinxibelelanisi, Solar itshaja Isilawuli, Andid Power Connector, Solar PV Connector, Solar PV Connector, Indibano ye-PV Cable, kunye neentlobo ezahlukeneyo zezincedisi zenkqubo ye-photovoltaic.
I-RINSIN ENERGY ngumthengisi oqeqeshiweyo we-OEM kunye ne-ODM yeCable Solar kunye neMC4 Solar Connector.
Sinokubonelela ngeephakeji ezahlukeneyo ezinjengemiqulu yekhebula, iibhokisi, imigqomo yeplanga, iireels kunye neepelethi ngobungakanani obahlukileyo njengoko ucela.
Sinokubonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokuhambisa ngentambo yelanga kunye nesihlanganisi seMC4 kwihlabathi liphela, njenge-DHL, FEDEX, UPS, TNT, ARAMAX, FOB, CIF, DDP ngolwandle / ngomoya.
I-RISIN ENERGY ibonelele ngemveliso yelanga (iiSolar Cables kunye neMC4 Solar Connectors) kwiiprojekthi zesitishi selanga kwihlabathi liphela, ezikwi-Southeast Asia, Oceania, South-North America, Middle East, Africa naseYurophu njl.
Inkqubo yelanga ibandakanya iphaneli yelanga, isibiyeli esonyukayo selanga, intambo yelanga, isixhobo sokudibanisa isola, i-Crimper kunye neSpanner izixhobo zelanga, iBhokisi yePV Combiner, i-PV DC Fuse, i-DC Circuit Breaker, i-DC SPD, i-DC MCCB, iSolar Battery, i-DC MCB, iMithwalo yeDC isixhobo, DC Isolator switch, Solar Pure Wave Inverter, AC Isolator switch, AC Home Appliacation, AC MCCB, Waterproof Enclosure Box, AC MCB, AC SPD, Air Switch and Contactor etc.
Zininzi izibonelelo zenkqubo yamandla elanga, ukhuseleko olusetyenziswayo, ukhuseleko ngaphandle kwengxolo, amandla ombane akumgangatho ophezulu, akukho mda kwindawo yokuhambisa izixhobo, akukho nkunkuma yepetroli kunye nolwakhiwo lwexesha elifutshane Kungenxa yoko amandla elanga esiba yeyona amandla athandwayo nonyuselweyo kwihlabathi liphela.
Q1: Zeziphi iimveliso eziphambili zenkampani yakho? Ngaba ungumenzi okanye umrhwebi?
Iimveliso zethu eziphambili zezi Iintambo zelanga, Izihlanganisi zelanga zeMC4I-PV Fuse Holder, DC Circuit breakers, Solar Charge Controller, Micro Grid Inverter, Anderson Power Connector kunye nezinye iimveliso ezinxulumene nelanga.Singumenzi onamava angaphezu kwe-10years kwilanga.
I-Q2: Ndingayifumana njani i-Quotation yeemveliso?
Thumela umyalezo wakho kuthi nge-imeyile: sales @ risinenergy.com, siya kukuphendula ngaphakathi kwemizuzu engama-30 ngexesha lokuSebenza.
I-Q3: Yenza njani inkampani yakho ngokubhekisele kuLawulo loMgangatho?
1) Zonke izinto eziluhlaza sikhethe enye ekumgangatho ophezulu.
2) Abasebenzi abaqeqeshiweyo nabanobuchule bakhathalela zonke iinkcukacha ekusingatheni imveliso.
3) ISebe loLawulo loMgangatho linoxanduva lokujonga umgangatho kwinkqubo nganye.
I-Q4: Ngaba uyabonelela ngeNkonzo yeProjekthi ye-OEM?
I-OEM kunye ne-ODM yamkelekile ngokufudumeleyo kwaye sinamava aphumelele ngokupheleleyo kwiiprojekthi ze-OEM.
Ngaphezulu, iqela lethu le-R & D liya kukunika iingcebiso zobungcali.
Q5: Ndingasifumana njani iSampulu?
Kulilungelo kuthi ukukunika iisampulu SIMAHLA, kodwa kungafuneka uhlawule iindleko zekhuriya.Ukuba unayo i-akhawunti yekhuriya, ungathumela ikhuriya yakho ukuba iye kuqokelela iisampulu.
Q6: Lide kangakanani ixesha lokuhambisa?
1) Umzekelo: Iintsuku ezi-1-3;
2) Kwii-Orders ezincinci: Iintsuku ezi-3-10;
3) Kwi-Orders yobunzima: Iintsuku ezili-10-18.
3in1 pv yesebe
3to1 isebe mc4
3to1 solar panel isinxibelelanisi
3Y ukuziqhelanisa nelanga
3Y yokuchaka elanga
Nceda usinike ulwazi lwakho oluxabisekileyo:
2to1 MC4 Y Isinxibelelanisi esiDibanisa iiPaneli zelanga ...
Uqhagamshelo lwe-IP67 olufanayo 1 ukuya ku-3 Y Uhlobo lweSebe ...
Solar Panel Cable Splitter 1 ukuya 4 T Branch Conn ...
4to1 MC4 Y Yesebe Connector Solar iPhaneli Paralle ...
Iphaneli yeSolar Connector MC4 kunye ne-DC 1000V TUV App ...
10x38mm Solar fuse emgceni umnini 1000V MC4 fuse ...
Nqamula isixhobo seMC4 Spanner utsalo ulungele iMC4 ...
Iplagi yePaneli yePaneli yeSolar Inverter MC4 M12 PV
I-TUV 2PfG 1169 Intsimbi esulungekileyo yeSolar PV Cable 6mm 1000V
I-5 kwi-1 yelanga yokuNxibelelana kweSebe eliNinzi ...
6 ukuya 1 MC4 Splitter Idibanisa iiphaneli Solar ngo ...
MC4 Isinxibelelanisi Sothuli Ubungqina bokuTywinwa kweCaf
MC4 Solar Diode isinxibelelanisi Kuba Solar iPhaneli Conne ...